Esinye nesinye isakhamuzi we Russian Federation unelungelo ukuvikela izithakazelo zabo enkantolo, nokuba zithole isivikelo ezifanele yenqubo. Lokhu kungenzeka is kubekiwe kuMthethosisekelo, okungukuthi Article 46. Lokhu kusebenza futhi ukulamula umbango tinchubo, lapho isakhamuzi kungaba ukuvikela labo ababencishwe amathuba ngaphambilini zabo yinoma yimuphi izithakazelo. Kulokhu, ubudlelwano lomthetho khona phakathi kwala maqembu womabili ezihilelekile kule mpikiswano, inezidingo uhlamvu yayo ekhethekile.
Ummeli enqubeni ukulamula umbango - lokhu ingenye izibalo ezibaluleke kakhulu. Ngemva kwakho konke umsebenzi wakhe wawuvame incike isinqumo secala. Njengomthetho, inkantolo ukulamula umbango njengoba izinhlangano izinhlangano ezingokomthetho futhi izakhamuzi abamukele isimo ezisemthethweni ukuze umphakathi i usomabhizinisi ngabanye. Yiqiniso, imithetho ngezinye izikhathi senze okuhlukile, kodwa kulokhu, kufanele ziyokwamukelwa isinqumo ezifanele. Ukubamba iqhaza ummeli enqubeni ukulamula umbango ngokuqinisekile kwandisa amathuba okuthi iqembu ngalinye umphumela nomusa kulo. Zonke bayogcina kuxhomeke endleleni eziyinkimbinkimbi futhi enezici kungaba icala. Kuba yisikhathi futhi lapho indima enkulu ngoba nommeli ongumakad 'ebona nokubandakanyeka kwakhe inqubo efanayo wamanje. Ngakho-ke, inkampani ngayinye (noma umuntu kuyinto usomabhizinisi ngabanye ngaphandle esungula zomthetho inhlangano) unesithakazelo lokuthi yayimelelwe ongoti abaqeqeshiwe. Yiqiniso, amasevisi abasebenzi abenza imisebenzi izobiza isizumbulu semali nge amaqanda amaningi. Nokho, ngezinye izikhathi, izinzuzo ngokuwina enkantolo idlula zonke izindleko izikhathi eziningana.
Okokuqala, ummeli ngoba ukulamula umbango kumele linqume Eqinisweni wangempela nendawo ethile ye-icala. Ngempela, agumenti ngezinye izikhathi ngokukhalipha esakhiwe lusekelwe ebufakazini obungenakuphikwa ukubonisa ukuthi isimangalo sigcwalisiwe kuyinto ube ongenangqondo ngempela. Ngenxa yalokho, iqembu ngeke ugweme ekuqhutshweni eside futhi oyisicefe nezindleko zezimali kanye ngangokunokwenzeka ukuqeda amabala on yabo idumela ibhizinisi. Lokhu kukhetha akukhetha, Nokho, ukuze sifinyelele kuba ngempela ezingavamile.
Ngaphezu kwalokho, ummeli enqubeni ukulamula umbango izimisele hhayi kuphela bamele izimfuno ikhasimende lakhe ngqo enkantolo. Kungase ahlele kahle izingxoxo phakathi abathintekayo ezingxoxweni ukuxazulula izinkinga zonke inkani ngendlela enokuthula kakhudlwana futhi ukubekezela. Ngenxa yalokho, onguchwepheshe walesi ezingeni akufanele nje kuphela kube nochwepheshe ezehlukile nolwazi imithetho isimo, kodwa futhi kuyinto sokusebenza kwengqondo kakhulu ukusungula oxhumana ngisho siyisinqumo esinzima kunazo zonke futhi kungenazo izingxabano.
High-ummeli enqubeni ukulamula umbango libhekene uchungechunge izici eziningana eziyisisekelo. Futhi akusiwona nje izindleko yemisebenzi ababeyenzile. Ungumnikazi inkulumo abanekhono futhi enembile, ukhuluma lokunemicabango lehambelanako, ungahlukumezi imigomo professional, okwenza kube kulula kakhulu ukufinyelela kuwo futhi kuyaqondakala. Uma umuntu phambi kwakho asakazeke ngamagama usithe futhi ngezikhathi ezithile lisebenzisa inkulumo ethi ngesiLatini, ukuthi izinsizakalo zakhe kumelwe zilahlwe ngokushesha. Cishe, lokhu kumane nje entsha ukuze ibhizinisi, okuyinto ibekwe njengoba onguchwepheshe abaqeqeshiwe. Khumbula ukuthi wavela kuye kuzoncika secala.
Ummeli enqubeni ukulamula umbango - lesi akusona ummeli abavamile futhi onguchwepheshe ube nolwazi olukhethekile. Kumelwe ukwazi kahle ukwenza itleyimu abaphikisi uma nganoma iyiphi indlela esephule izibopho zayo. Ngaphezu kwalokho, emahlombe Uchwepheshe oba ukucutshungulwa zonke izimangalo kanye nemibhalo eyesekayo, kwenziwe ucwaningo olunzulu wefayela icala, kanye ukuhlola sekufanele awushiye lokuya enkantolo. Yingakho-ke kubalulekile ukuba nenze izinqumo ezifanele futhi umsebenzi othile ukuphathwa inqubo nomele ayakufanelekela.
Indlela yokuzifundela njengendlela ukuthola imibono emisha